Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in wakhti dhow la furayo waddada isku xirta Muqdisho – Baydhabo - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxda sare ee dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wakhti dhaw lagu dhawaaqi doono in ay furan tahay wadada isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho.
Raysalwasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax shirdoon (Saacid) iyo wasiirka Gaashaandhiga ayaa sheegay in wakhti kooban ay ka hartay furitaanka wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho.
Dowlada Federaalka ayaa guul ku tilmaamtay hawlgaladii ugu danbeeyey ee ciidamada AMISOM iyo Ciidamada Dowlada ka wada sameeyeen qeybo kamid ah gobalka Bay.
Guusha ay madaxda dowlada Soomaaliya ku dhawaaqeen ayaa imaaneysa kadib markii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Federaalka ay si nabad ah kula wareegeen magaalada Buurhakaba oo ah magaalada ugu weyn ee u dhaxeysay Baydhabo iyo Muqdisho oo ay weli gacanta ku hayeen xoogaga Al Shabaab.
Ciidamada huwanta ayaa si nabad ah kula wareegay magaalada Buurhakaba arrintan oo ay dadka qaarkood ku tilmaameen mid muujineysa awooda Al Shabaab ee gobalka Bay oo si aad ah usii wiiqmeysa.